> Resource> Nyefee> otú nyefee Text Ozi New ekwentị
Hi, m na nso nso kwalite ekwentị m ka a Galaxy SII si a Samsung gt-S3350. Dị ụzọ ọ bụla m nwere ike nyefee m ozi ederede (Igbe mbata na Sentbox) si gt-S3350 ka Galaxy SII? M na-eji Samsung Kies omume nyefee m Ndi ana-akpo, Music na Pictures, ma e nwere adịghị ka ọ bụla nhọrọ n'ime usoro ihe omume nyefee ozi ederede. M ga-aghọta nnọọ bụla ọ na aro? Ekele.
Mgbe na a ọhụrụ ekwentị, dị ka Android ekwentị ma ọ bụ iPhone, i nwere ike na-amasị nyefee ozi ederede na mkpa ma ọ bụ mwute ozi si ochie ekwentị na ya. Ya mere, i nwere ike ịgụ ozi ederede na ọhụrụ gị na ekwentị. Iji nyefee ozi ederede ọhụrụ ekwentị gị, ukwuu nwere ike ikwu na ị na a otu-click ekwentị transfer ngwá ọrụ - Wondeshare MobileTrans ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac. Ọ na-tumadi iji nyere aka na ị nyefee data n'etiti igwe na mbadamba na-agba ọsọ iOS, Symbian na Android. Na ya aka, ị nwere ike nyefee niile ozi ederede na gị ochie Android ekwentị, Nokia na ekwentị na iPhone ndị ọhụrụ Android ekwentị ma ọ bụ iPhone ke kiet ke otu click.
Ibudata ngwá ọrụ a na-agbalị na-ebufe ozi ederede ọhụrụ ekwentị. Ebe a, ga-amasị m na-enye Windows version a ogbugba.
Cheta na: MobileTrans bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na nza nke igwe na mbadamba na-agba ọsọ Android, Symbian na iOS (iOS 9 gụnyere). Ego ebe a iji nweta ihe Ama.
Otú nyefee ozi ederede ọhụrụ ekwentị
Nzọụkwụ 1. Gbaa a na ekwentị transfer ngwá ọrụ na kọmputa
Na-amalite, wụnye na-agba ọsọ MobileTrans na kọmputa. Bụ isi window ga-gosiri na kọmputa na ihuenyo. Pịa na ekwentị ekwentị Nyefee. Nke a na-ekwentị transfer window.
Cheta na: Iji nyefee data ma ọ bụ site iPhone (iPhone 6S Plus, iPhone 6S akwado), iPad na iPod, ị kwesịrị ị na wụnye iTunes na kọmputa.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị ochie na ndị ọhụrụ igwe na kọmputa
Dị ka m kwuru n'elu, MobileTrans-ahapụ gị mbupụ SMS na ochie Nokia ekwentị, Android ekwentị na ọbụna iPhone, na mgbe ahụ idetuo ha ọhụrụ gị ma ọ bụ iPhone Android ekwentị. Ya mere, jikọọ ekwentị abụọ na ị chọrọ ime ihe SMS transfer na kọmputa na USB cables. Mgbe achọpụtara, ochie ekwentị na gosiri na n'aka ekpe, aha ya bụ dị ka isi iyi ekwentị, na ọhụrụ Android ekwentị ma ọ bụ iPhone, ebe ekwentị na-egosi na nri.
"Clear data tupu oyiri", taabụ n'okpuru ebe ekwentị, a na-eji anya nke ugbu a SMS igbe dị na ebe ekwentị tupu akwụkwọ. Ego ya mgbe ị na-ekpebi naanị ịzọpụta SMS si ochie ekwentị. E wezụga, "tụgharịa" n'etiti ekwentị abụọ na-ahapụ gị ịgbanwe ebe nke abụọ igwe.
Nzọụkwụ 3. Nyefee odide ka ọhụrụ ekwentị
E wezụga ederede ozi, MobileTrans ike gị nyefee ndị ọzọ faịlụ, dị ka kọntaktị, music na photos. Ya mere, wepụ ihe akara tupu ndị ọzọ faịlụ mgbe nnọọ na ị chọrọ ịkwaga ozi ederede ọhụrụ ekwentị. Mgbe ahụ, pịa "Malite Copy". Biko mgbe Ikwupu ma ekwentị tupu nyefe na-eme. Mgbe ọ mere, pịa "OK"
The video bụ banyere ebufe SMS ọhụrụ ekwentị
Gbalịa MobileTrans nyefee ochie ozi ederede ọhụrụ ekwentị.